Pine64 na-ekwuwapụta PinePhone KDE Community Edition | Site na Linux
Obodo Pine64 na oru ngo KDE ekwuputala ama ama PinePhone KDE Mbipụta Obodo (ngwa ngwa na mpaghara KDE Plasma Mobile).
Mbipụta KDE na-agbakwunye ụdị ọdịiche dị iche iche ewepụtara na mbụ nke na-ebufe postmarketOS, UBports / Ubuntu Touch, na Manjaro.
1 Banyere PinePhone KDE Community Edition
1.1 Nweta PinePhone KDE Community Edition
Banyere PinePhone KDE Community Edition
Site na mbipụta ọhụrụ a ọ pụtara na enwere ndozi na sistemụ niile maka jupụta ngwanrọ ahụ, nke ebuferela na nsụgharị dị iche iche nke ngwa ngwa.
Ejirila Linux mee kernel patel iji melite nkwado ngwaike. Enweela mmụba ihuenyo ahụ ruo 60 Hz (1/3 karịa karịa) maka mmepụta dị nro na nzaghachi ka mma mgbe ị na-abanye ma ọ bụ na-arụ ọrụ na ihuenyo mmetụ.
Ma arụ ọrụ, nke a ka emegoro dị ka ebe a na-ebugharị ebugharị n'akpa uwe na ị nwere ike jikọọ a ileba anya na-enweta a maara desktọọpụ na-ahụkarị Linux ngwa.
Usoro nke ịlaghachi n'ụra ejirila ọsọ ọsọ mgbe ị na-anata oku na-abata. Ukwuu ntụkwasị obi nke ịrụ ọrụ na ngwaọrụ Bluetooth. Ogo nke oku oku enwegoro nke ọma. A na-enyocha ọnọdụ izugbe nke ikpo okwu na telephony ahụ dị ka nke zuru oke maka iji ya kwa ụbọchị.
Ọzọkwa, ekwuru ihe nkwalite dị ukwuu na KDE Plasma Mobile platform, nke dabere na mbugharị mbugharị nke desktọọpụ Plasma 5, ụlọ akwụkwọ KDE Frameworks 5, nke ekwentị Ofono, na usoro nkwukọrịta Telepathy.
Iji mepụta ngwa ngwa, a na-etinye Qt, setịpụrụ ihe ndị mejupụtara Mauikit na Kirigami site na KDE Frameworks, na-enye gị ohere ịmepụta ihu dị iche iche, dabara maka smartphones, mbadamba na PC. A na-eji kwin_wayland mejupụtara ihe nkesa na-egosipụta eserese. A na-eji PulseAudio eme ihe maka nhazi ụda.
Ọdịdị gụnyere ngwa dịka KDE Connect iji jikọọ ekwentị gị na desktọọpụ, onye na-ekiri akwụkwọ Okular, VVave egwu egwu, Ndị na-ekiri ihe oyiyi, Koko na Pix, Buho System Maintenance Notes, Calindori Calendar Planner, File Manager, Index, Manager Manager na ndị ọzọ.
n'etiti mgbanwe na nso nso a na KDE Plasma Mobile, ị nwere ike igosipụta ngosipụta thumbnail nke ngwa ahụ mgbe ị na-agbanwe ọrụ, mmezi nke interface taskbar, ihuenyo ọhụụ maka itinye koodu PIN maka kaadị SIM, ọnọdụ ngwa ngwa Bluetooth ngwa ngwa, bọtịnụ iji mee ka tọọchị ahụ dị na Pinephone.
KClock, KWeather, Alligator ngwa ka mma (Onye ahịa RSS), QMLKonsole, Qrca (nyocha QR koodu nyocha) na Calindori (onye nhazi kalenda). Correct ngosipụta nke oku na-aga akụkọ ihe mere eme na dialer e setịpụrụ.
E megharịrị ngwa SpaceBar kpamkpam, nke ejiri meziwanye interface ya, yana ka ọ ghara ida SMS / MMS mgbe ngwa ahụ na-enweghị ọrụ, etinyere usoro njikwa ndabere pụrụ iche.
Gbakwunyere a modul ọhụrụ ka onye nhazi ka hazie mebere kiiboodu Maliit. Ejirila ngwa ọhụrụ: metronome maka ndị egwu Rattlesnake na onye ahịa matrik NeoChat (ndụdụ nke Spectral dabere na libQuotient).
Nweta PinePhone KDE Community Edition
Mbipụta ekwentị PinePhone na KDE A ga-ere ya na Disemba 1 ma nyefee ya na nsụgharị nwere 2GB RAM + 16GB eMMC na 3GB RAM + 32GB eMMC + USB Type-C nkwụnye iji jikọọ na ileba anya (HDMI), netwọk (10/100 Ethernet), keyboard na òké (ọdụ abụọ USB 2.0).
Na mgbakwunye na gburugburu KDE Plasma Mobile, a na-ewepụta ihe oyiyi buut maka PinePhone dabere na postmarketOS, UBports, Maemo Leste, Manjaro, LuneOS, Nemo Mobile na akụkụ Sailfish mepere emepe.
Ọrụ na-aga n'ihu ịkwadebe ụlọ na NixOS. Enwere ike ibudata gburugburu ebe obibi ngwanrọ site na kaadị SD na-enweghị mkpa ọkụ.
N'ikpeazụ, maka ndị nwere mmasị inweta ụdị mbipụta PinePhone a, ha ga-enweta ụdị nke ngwaọrụ ndị nwere KDE site na webụsaịtị gọọmentị.
Mbipụta ga-efu $ 149 na $ 199 n'otu n'otu na mgbakwunye na nke a, a ghaghị iburu ụgwọ mbupu n'uche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Pine64 na-ekwuputa PinePhone KDE Community Edition